fifidianana2018 Archives - Page 3 of 3 - Book News Madagascar
Fifidianana 2018 – Tanora miara-misalahy amin’ny famokarana sarimihetsika
Manaraka fiofanana amin’ny fanatontosana sarimihetsika ny tanora 30 avy amina fikambanana maro eto amin’ny Nosy. Tanjona amin’izany ny famokarana sarimihetsika mahakasika ny fifidianana.
Fifidianana 2018 – Fampandrosoana miainga eny ifotony no katsahin’ny kandidà Dr Jules Étienne
Madagasikara milamina sy madio ary mangarahara no fototry hijoroan’ny Antoko Madagasikara Fivoarana na ny Mafi, izay manolotra an’i Dr Jules Etienne ho kandidà amin’ny fifidianana 2018. (more…)
Dama: “Nisitaka tamin’ny tontolo politika izahay mivady satria ngeza be ilay hantsana. Vakivaky ny fiarahamonina!”
Natolotry ny antoko “Valimbabena ho an’ny Madagasikara” tamin’ny fomba ofisialy ny Sabotsy 30 jona teo ho kandidà amin’ny fifidianana i Dama.
English version avalaible on https://www.booknews.today/dama-politics-society-abused/